Tag: ftc ngosi | Martech Zone
Tag: ftc ngosi
Mara Ojiji Ojiji Gị, Ngosipụta na IP
N'ụtụtụ a, enwetara m akwụkwọ ozi sitere n'aka ụlọ ọrụ anyị dere banyere ya. Email ahụ siri ike na-achọ ka anyị wepụ ihe ọ bụla metụtara aha ụlọ ọrụ ụghalaahịa na post anyị ma tụọ aro ka anyị jikọta saịtị ha na-eji ahịrịokwu kama. Trademark Fair Usage M na-eche na ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ na ọ gara nke ọma n'oge gara aga na-emegharị ndị mmadụ iji wepụ aha ma tinye ahịrịokwu ahụ - ọ bụ SEO
Kedu ihe bụ Mgbasa Ozi Ndị Obodo?
Fraịde, Machị 3, 2017 Douglas Karr
Dịka FTC kọwara ya, mgbasa ozi nke obodo bụ aghụghọ ma ọ bụrụ na enwere nkọwahie ihe ma ọ bụ ọbụlagodi na enweghị ozi ọ bụla nwere ike iduhie onye na-azụ ya ihe na ọnọdụ ya. Nke ahụ bụ nkwupụta okwu nke onwe, echeghị m na m chọrọ ịgbachitere onwe m megide ikike gọọmentị. Kedu ihe bụ Mgbasa Ozi Ndị Obodo? Federal Trade Commission na-akọwapụta mgbasa ozi ala dị ka ọdịnaya ọ bụla nwere myirịta na ozi ọma,